Ciise wuxuu wax ku bogsiiyay- awoodda erayga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surah ‘Abasa (Surah 80 – He Frowned) wuxuu duugaa nabi Muxamed CSW isagoo la kulmay nin indha la’.
Miyaad ogtahay inay u dhawdahay inuu hanuuno oo Daahir noqdo.
Suuradda ‘Abasa 80: 1-3
In kasta oo ay jirtay fursad ay ku fahmaan ruuxa, nebi Maxamed NNKH ma uusan bogsiin ninkii indhaha la’aa. Nebi Isa al Masih NNKH wuxuu ahaa mid u gaar ah nebiyadii sida loo awoodo oo loo daaweeyo indhoolaha. Wuxuu lahaa amar aysan soo bandhigin nebiyo kale, xitaa nebiyadii sida Nebi Muuse, Nebi Ibraahim iyo Nebi Maxamed (NNKH). Isaga ayaa ahaa nebi keliya ee weligii awoodda u lahaa inuu la kulmo caqabadda gaarka ah ee ku jirta Surah Ghafir (Surah 43 – The Forgiver)
Surah Ghafir 43: 40
Suuradda Al-Maida (Suuradda 5 – Shaxda jadwalka) waxaay u sharxeeysaa mucjisooyinka Ciise masiix, sidan :-
(Xusuuso) Markuu Eebe dhihi Ciise Binu Maryamow Xusuuso Nicmadaydii korkaaga ahayd iyo hooyadaaba markaan kugu Xoojinay Ruuxii Daahirka ahaa (Jibriil) ood kula Hadlaysay Dadka sariir-ilmood iyo adoo meel dhaxaada, iyo Markaan ku Baray Kitaabka iyo Xigmadda, iyo Tawreed, Injiil, iyo Markaad ka Yeelaysay Dhoobada Sidii Shimbir Idankayga ood Afuufaysay oy Noqonaysay Shimbir Idankayga, ood Bogsiinaysay indhoole Ku dhashe iyo Baras laha Idankayga, ood soo Bixinaysay Maydka Idankayga, Markaan kaa kaafiyey Banii Israa’iil markaad ula timid Xujooyin, oy Dheheen kuwii Gaaloobay oo ka mida kani waxaan Sixir ahayn ma aha.
al-Maida, Surah5: 110
Surah Ali-Imran (Surah 3 – Qoyska Imaam) waxay sii sharaxayaan awoodiisa mucjisooyinka
Waa Rasuulka Bani Isra’iil, (isagoo) u dhihi waxaan idiin la imid Aayad xaga Eebihiin ka ahaatay, waxaana idiinka abuuri dhoobada shimbira oo kale, oon afuufi ooy noqon shimbir Idamka Eebe, waxaana bogsiiyaa indhala’aan kudhashe Baraslaha, waxaana nooleeyaa Maydka Idamka Eebe, waxaana idiin ka warrami waxaad Cunaysaan iyo waxaad ku kaydsanaysaan Guryihiinna, taasira waxay idiin tahay Calamad haddaad rumeynaysaan (Xaqa).Waxaana rumeyn wixii iga horreeyey oo Tawreed ah, waxaan idiin bannayn wixii laydinka reebay Qaarkiis, waxaana idiin la imid Calaamad xagga Eebihiin ka ahaatay, ee ka dhawrsada Eebe, ina adeeca.
Suuradda Al-Imraan3: 49-50
Kuwii indhaha la’aa wax bay arkeen, kuwii baraska qabayna waa bogsadeen, kuwii dhintayna waa la sara kiciyey. Taasi waa sababta uu Surah al-Maida (5: 110) u leeyahay Isa al Masih NNKH wuxuu muujiyey ‘astaamo cad’ iyo Surah Al-Imran (3: 49-50) waxay cadeyneysaa in calaamaddiisa ‘ay kaaga ahayd’ xagga Eebahaa ‘. Maaha nacasnimo in la iska indho tiro macnaha calaamadahan xoogga leh?
Waxaanu soo aragnay sidii awooda lahayd ee Ciise masiixa wax ogu barayay,isagoo adeegsanayay awooda uu yeelan karay Masiixa oo keliya.Isla markuu bagay wacdintii buurta Injiilka wax uu diiwaan geliyay wacdigaa:-
Goortuu buurta ka soo degay, dad badan baa soo raacay. 2 Oo bal eeg, waxaa u yimid nin baras leh oo caabuday, oo ku yidhi, Sayidow, haddaad doonaysid, waad i daahirin kartaa. 3 Ciise intuu gacantiisa soo taagay, ayuu taabtay, oo ku yidhi, Waan doonayaa ee daahirsanow. Kolkiiba baraskiisa wuu ka daahirsanaaday, 4 oo Ciise ayaa ku yidhi, Iska eeg, oo ninna ha u sheegin, laakiin jidkaaga iska mar, oo wadaadka istus, oo bixi hadiyaddii Muuse amray, marag iyaga ha u ahaatee.
Matayos 8: 1-4
Hadda Ciise Masiixi wuxuu awoodiisa ku tusay isagoo nin baris qaba ka. Wuxuu si fudud u yidhi ‘nadiif ahoow’ oo wuu nadiifiyey oo bogsiiyey. Erayadiisu waxay awood u lahaayeen inay bogsiiyaan oo ay wax baraan.
Kadib Ciise (NNKH) wuxuu la kulmay ‘cadow’. wakhtigaas Roomaanku waxay ahaayeen kuwii loogu necbanaa dhulka yuhuudda. Yuhuuddu waxay wakhtigaas u arkayeen Roomaanku sidii ay dareemayaan qaar reer Falastiin ah dareenka ay ka qabaan Israeliyiinta maanta.Yahuudu Kuwa ugu necebnaayeenwaxay ahaayeen askarta Roomaanka oo inta badan adeegsanaya awooddooda. Waxaa taas ka sii sii daran oo weliba ahaa saraakiishii Roomaanka – boqol-u-taliyihii ‘oo amray askartan. Ciise wuxuu hadda la kulmaa ‘cadowga’ nacaybka noocaas ah lahaa. Waa sidan sidaay u kulmeen:
Ciise Masiix iyo Boqol u taliyahii
5 Goortuu Kafarna’um galay, waxaa u yimid boqol-u-taliye, isagoo baryaya 6 oo leh, Sayidow, midiidinkaygii guriguu jiifaa, isagoo curyaannimo u buka oo aad u xanuunsanaya. 7 Kolkaasuu Ciise wuxuu ku yidhi, Waan imanayaa oo bogsiinayaa. 8 Markaasaa boqol-u-taliyihii u jawaabay oo ku yidhi, Sayidow, anigu ma istaahilo inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo gashid, laakiin hadal keliya dheh, midiidinkayguna waa bogsan doonaa. 9 Waayo, anigu waxaan ahay nin laga sarreeyo oo askar baa iga hoosaysa. Kan waxaan ku idhaahdaa, Tag, wuuna tagaa; mid kalena, Kaalay, wuuna yimaadaa; midiidinkaygana, Waxan samee, wuuna sameeyaa. 10 Goortuu Ciise taas maqlay, wuu ka yaabay, wuxuuna ku yidhi kuwii la socday, Runtii waxaan idinku leeyahay, Rumaysad sidan u weyn oo kale reer binu Israa’iil kama dhex helin. 11 Waxaan idinku leeyahay, Qaar badan ayaa bari iyo galbeed ka iman doona oo la fadhiisan doona Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub boqortooyadii jannada gudaheeda, 12 laakiin wiilashii boqortooyada waxaa lagu tuuri doonaa gudcurka dibadda ah. Meeshaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilkojirriqsi. 13 Markaasaa Ciise wuxuu boqol-u-taliyihii ku yidhi, Tag. Sidaad u ramaysatay ha kuu noqoto e. Oo saacaddaas ayaa midiidinkii bogsaday.
Erayadii Ciise oo awood lahaa ayaa si fudud u amaray oo ku yidhi oo amarkii oo meel fog bay ka dhacday! Laakiin waxa la yaabey Ciise (NNKH) waxay ahayd oo keliya in ‘cadowgan’ jaahilka ah oo keliya uu leeyahay rumaysad uu ku aqoonsado awoodda eraygiisa – in Masiixa uu awood u leeyahay inuu dhaho oo ay noqon . Ninkii aan filayno inuusan lahayn iimaan (maxaa yeelay wuxuu ka yimid dadka ‘qaldan’ iyo diinta ‘qaldan’), oo ka soo jeeda ereyada Ciise (NNKH), inuu maalin uun ku biiri doono ciida jannada isagoo la jira Ibraahim iyo kan kale ee xaqqa ah. , halka kuwa ‘saxda ah’ ee diinta iyo dadka ‘sax ah’ aysan doonaynin. Ciise (NNKH) wuxuu nooga digayaa in ayan ahayn diin ama dhaxal in lagu damaano qaado jannada.
Ciise wuxuu sara kiciyey gabadha dhimatay ee uu dhalay hogaamiyaha sunagogga
Tani macnaheedu maahan in Isa al Masih (NNKH) uusan bogsiinenin hoggaamiyeyaasha Yuhuudda. Xaqiiqdii, mid ka mid ah mucjisooyinkiisii ​​ugu xoogga badnaa ayaa ahayd sara kicinta gabadha dhimatay ee hoggaamiye sunagog. Waxaana Injilka ku qoran sidan:
Mar labaad, si fudud, isagoo adeegsanaya erayga amar, Ciise wuxuu ka sara kiciyey dhimashada gabadh yar . Ma ahan diin ama diin la’aan, ahaato Yahuud ama ma aha, ayaa Ciise Masiix ka celiyay inuu mucjisooyin sameeyo uu dadka ku bogsiiyo. Meel kasta oo uu ka helay iimaan, iyadoon loo eegayn jinsi, jinsi ama diin wuxuu u isticmaali lahaa awood uu ku bogsado.
Ciise Masiix wuxuu bogsiiyay dad badan,oo ay ka mid yahiin saaxiibadiis
Waxaa kale oo injiilka ku qoran inuu Ciise Masiix aaday guriga Butroos,kaasoo markii dambe noqon doonay af hayeenka ogu sareeyo 12 xertiisa.oo markuu halkaa tagayna wuxuu arkay baahi oo wuu u adeegay,sida ku qoran:
Wuxuu awood u lahaa jinniyada shar leh inuu dadka ka saaro’si fudud’ erayo ‘. Injil ayaa markaa ina xusuusineysa in Axdiga hore uu saadaaliyay in bogsashada mucjisada ay calaamad u tahay imaatinka Masiixa. Dhab ahaantii nebi Ishacyaah) wuxuu sidoo kale wax ka sii sheegay meel kale isagoo ku hadlaya Imaatinka Masiixa sidaan:
Ruuxii Sayidka Rabbiga ah ayaa i dul jooga, waayo, wuxuu Rabbigu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo, wuxuuna ii soo diray inaan kuwa qalbiga jaban bogsiiyo, iyo inaan maxaabiista xornimada ogeysiiyo, kuwa xidhanna furriinnimada, 2 iyo inaan dadka ogeysiiyo sannadda qaabbilaadda ah ee Rabbiga iyo maalintii aarsashada Ilaahayaga, iyo inaan kuwa baroorta oo dhan u qalbi qaboojiyo, 3 iyo inaan kuwa Siyoon ku baroorta meeshii dambaska qurux madaxooda ka saaro, oo meeshii baroorashadana aan saliiddii farxadda ka siiyo, oo meeshii qalbijabna aan dharkii ammaanta ka siiyo, in iyaga lagu magacaabo geedihii xaqnimada iyo beeriddii Rabbiga, si uu isagu u ammaanmo.
Nebi Ishacyaah wuxuu sii saadaaliyay (750 D.C.) in Masiixa uu keeni doono ‘war wanaagsan’ (= ‘injiil’ = ‘injil’) oo uu masaakiinta u nasin, oo uu dadka xoreynta iyo sii deynta doono. Waxbarista, bogsiinta kuwa buka, iyo soo nooleynta kuwii dhintay ayaa ahaayeed siyaabaha Ciise u fuliyay wax sii sheegidda. Oo wuxuu waxyaalahan oo dhan u sameeyey si sahlan isagoo hadalka erayga amar u leh dadka, cudur, jinniyo shar leh iyo xitaa dhimasho laftiisa. Tani waa sababta uu Surah Al-Imran ugu yeeray:
(Xusuuso) markey tidhi Malaa’igtu Maryamooy Eebe wuxuu kuugu Bishaarayn Kalimo Xaggiisa ah (Wiil) Magaeiisu yahay Masiix Ciise Ibnu Maryam isagoo Sharaf leh Adduun iyo Aakhiraba kana mid ah kuwa la soo dhaweeyey
Surat3: 45 (Al-Imran
Injiilka sidoo kale wuxuu magaca Ciise ku sheegayaa inuu yahay Ereyga Ilaah sida ku qoran
Muujintii 19: 13
Ciise, Masiixi ahaan, wuxuu lahaa awooda hadal ah oo loogu yeery ‘Erayga xagga Ilaah ka yimid’ iyo ‘Ereyga Ilaah’. Maaddaama tan loogu yeedhay Buugagta Quduuska ah, waxaan caqli gal ah inaan ixtiraamno oo addeecno waxbaristiisa. Tan xigta waxaan arki sida Dabeecaddu u adeecday eraygiisa.
Tags:awooda Isa al masihbogsashada isa al masihErayga CiiseEraygii Isha al masiiInjil la soo bandhigay Tagshealings of Isamaxay qur'an ka leedahay Ciisemaxuu dhaawici muxuu ka yidhi Ciise>maxuu yahay maxamed masihmucjisooyinka Isamucjisooyinka isa al masihmuxamed waa maxaymuxuu dhaawici leeyahay Waa sideemuxuu yahay al al masihQur'aanku muxuu ka leeyahay isa al masih ?